မက်ဆီဟာ စံချိန်မှတ်တမ်းတွေ ရယူဖို့အတွက် မွေးဖွားလာသူပါ
ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲမှာ Messi တင်ရှိထားတဲ့ စံချိန်မှတ်တမ်းကောင်းများ
29 Nov 2018 . 11:21 PM
ဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့ အာဂျင်တီးနား နာမည်ကျော်တိုက်စစ်မှူး မက်ဆီ Messi ဟာ PSV ကို အနိုင်ရခဲ့တဲ့ပွဲအပြီးမှာ ချန်ပီယံလိဂ် စံချိန်မှတ်တမ်းကောင်းတစ်ခုကို စိုက်ထူနိုင်ခဲ့တယ်။ အဲဒါကတော့ ကလပ်အသင်းတစ်သင်းတည်းအတွက် ချန်ပီယံလိဂ်သွင်းဂိုးအများဆုံး ကစားသမားအဖြစ် (၁၀၆)ဂိုးနဲ့ စံချိန်သစ်တင်နိုင်ခဲ့တာပါ။ ဒါကြောင့် ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲမှာ မက်ဆီတင်ရှိခဲ့တဲ့ စံချိန်မှတ်တမ်းတွေကို ပရိသတ်တွေ သိနိုင်အောင် ဖော်ပြလိုက်ပါတယ် . .
မက်ဆီဟာ ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲသမိုင်းမှာ ဟက်ထရစ်အများဆုံး သွင်းသူအဖြစ် စံချိန်တင်ထားပါတယ်။ မက်ဆီဟာ စုစုပေါင်း ဟက်ထရစ် (၈)ကြိမ်သွင်းထားပြီး စံချိန်တင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ချန်ပီယံလိဂ်ပွဲ(၁၀၀)ကို အသက်အငယ်ဆုံး ပြည့်ခဲ့သူ
ချန်ပီယံလိဂ် ပွဲ(၁၀၀)ကို အသက်အငယ်ဆုံး ပြည့်သူအဖြစ် စံချိန်တင်ထားတဲ့ မက်ဆီဟာ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တုန်းက (၂၈)နှစ်၊ (၈၄)ရက်နဲ့ စံချိန်တင်ခဲ့တာပါ။
မက်ဆီအတွက် နောက်ထပ်စံချိန်ကောင်းတစ်ခုက ချန်ပီယံလိဂ်အုပ်စုအဆင့်မှာ ဂိုးအများဆုံးသွင်းထားသူအဖြစ် ရပ်တည်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ မက်ဆီဟာ စုစုပေါင်း (၆၆)ဂိုးနဲ့ ထိပ်ဆုံးက ဦးဆောင်နေပါတယ်။
မက်ဆီဟာ တခြားမှတ်တမ်းကောင်းတွေ ရယူခဲ့ပေမယ့်လည်း စံချိန်မဟုတ်ဘဲ တခြားကစားသမားတွေနဲ့ ပူးတွဲအနေနဲ့သာ ရပ်တည်နေလို့ အဲဒါတွေကို ထည့်သွင်းမဖော်ပြတော့ပါဘူး။ အသက်(၃၁)နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်ပေမယ့်လည်း ခြေစွမ်းပိုင်းက ကျရိပ်မပြသေးတဲ့ မက်ဆီ ချန်ပီယံလိဂ်မှာ နောက်ထပ် ဘယ်လိုစံချိန်တွေ ထပ်တင်ဦးမလဲဆိုတာကတော့ . . .
ခနျြပီယံလိဂျပွိုငျပှဲမှာ Messi တငျရှိထားတဲ့ စံခြိနျမှတျတမျးကောငျးမြား
ဘာစီလိုနာအသငျးရဲ့ အာဂငျြတီးနား နာမညျကြျောတိုကျစဈမှူး မကျဆီ Messi ဟာ PSV ကို အနိုငျရခဲ့တဲ့ပှဲအပွီးမှာ ခနျြပီယံလိဂျ စံခြိနျမှတျတမျးကောငျးတဈခုကို စိုကျထူနိုငျခဲ့တယျ။ အဲဒါကတော့ ကလပျအသငျးတဈသငျးတညျးအတှကျ ခနျြပီယံလိဂျသှငျးဂိုးအမြားဆုံး ကစားသမားအဖွဈ (၁၀၆)ဂိုးနဲ့ စံခြိနျသဈတငျနိုငျခဲ့တာပါ။ ဒါကွောငျ့ ခနျြပီယံလိဂျပွိုငျပှဲမှာ မကျဆီတငျရှိခဲ့တဲ့ စံခြိနျမှတျတမျးတှကေို ပရိသတျတှေ သိနိုငျအောငျ ဖျောပွလိုကျပါတယျ . .
မကျဆီဟာ ခနျြပီယံလိဂျပွိုငျပှဲသမိုငျးမှာ ဟကျထရဈအမြားဆုံး သှငျးသူအဖွဈ စံခြိနျတငျထားပါတယျ။ မကျဆီဟာ စုစုပေါငျး ဟကျထရဈ (၈)ကွိမျသှငျးထားပွီး စံခြိနျတငျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ခနျြပီယံလိဂျပှဲ(၁၀၀)ကို အသကျအငယျဆုံး ပွညျ့ခဲ့သူ
ခနျြပီယံလိဂျ ပှဲ(၁၀၀)ကို အသကျအငယျဆုံး ပွညျ့သူအဖွဈ စံခြိနျတငျထားတဲ့ မကျဆီဟာ ၂၀၁၅ ခုနှဈတုနျးက (၂၈)နှဈ၊ (၈၄)ရကျနဲ့ စံခြိနျတငျခဲ့တာပါ။
မကျဆီအတှကျ နောကျထပျစံခြိနျကောငျးတဈခုက ခနျြပီယံလိဂျအုပျစုအဆငျ့မှာ ဂိုးအမြားဆုံးသှငျးထားသူအဖွဈ ရပျတညျနတောဖွဈပါတယျ။ မကျဆီဟာ စုစုပေါငျး (၆၆)ဂိုးနဲ့ ထိပျဆုံးက ဦးဆောငျနပေါတယျ။
မကျဆီဟာ တခွားမှတျတမျးကောငျးတှေ ရယူခဲ့ပမေယျ့လညျး စံခြိနျမဟုတျဘဲ တခွားကစားသမားတှနေဲ့ ပူးတှဲအနနေဲ့သာ ရပျတညျနလေို့ အဲဒါတှကေို ထညျ့သှငျးမဖျောပွတော့ပါဘူး။ အသကျ(၃၁)နှဈအရှယျရှိပွီဖွဈပမေယျ့လညျး ခွစှေမျးပိုငျးက ကရြိပျမပွသေးတဲ့ မကျဆီ ခနျြပီယံလိဂျမှာ နောကျထပျ ဘယျလိုစံခြိနျတှေ ထပျတငျဦးမလဲဆိုတာကတော့ . . .